Nhau - PCB Kopa Injiniya uchishandisa akawanda-masenduru akadhindwa wedunhu bhodhi
Tidaidzei: +86 189 0285 6696
SMT Misa Kugadzira
Pcb Copy uye pcb Clone
IC Kutsemuka uye Kodhi Kubvisa
IC MCU Murongi, Burn Unit
Pcb Kopira Injiniya uchishandisa akawanda-masenduru akadhindwa wedunhu bhodhi
1, PCB Kopa Injiniya uchishandisa akawanda-masenduru akadhindwa wedunhu bhodhi
Izvi zvinogona kutorwa kubva muchimiro cheyakanaka yekudzivirira mitezo: yepakati dhizaini yetambo yemagetsi kana pasi, magetsi anonamwa mubhodhi, mativi ese ekurapa kwekurapa, anogona kuyerera kuburikidza nekudzikisira kwepazasi uye kwakadzika hakukanganisa imwe neimwe zvimwe; Iyo yemukati layer yakaitwa nenzvimbo hombe yenzvimbo inoitisa, waya dziine yakakura electrostatic capacitance pakati pekuumbwa kwepasi kwazvo impedance magetsi magetsi wedunhu kopi bhodhi, iyo inogona kunyatso kudzivirira dunhu redhiyo radiation uye kugamuchira ruzha.
2, PCB Kopa Injiniya yakanyatsosarudzwa zvishandiso
Sarudzo inofanirwa kutarisisa kuchembera kwezvinhu, uye sarudza iyo tembiricha yekushisa teki yediki diki kopi bhodhi. Kune akakwirira-frequency maseketi, inofanirwa kuve yakakodzera kushandisa iyo firimu kudzora redunhu mwaranzi. Mukusarudza zvishandiso zvine musoro, kunyatso tarisa maratidziro ayo emahara, zvakanaka kushandisa HTL, kana ese ari maviri mashandisiro esimba, kushandiswa kweVDD-15V CMOS kwakakodzera.
3, PCB Kopa Injiniya yakadhindwa redunhu bhodhi "yakazara ivhu"
Pakudhirowa yepamusoro-frequency wedunhu mabhodhi, kuwedzera kune seakakora sevhu rakadhindwa waya, redunhu bhodhi haifanire kugarwa nenzvimbo yese sewaya yepasi, kuitira kuti mudziyo uswedere pasi. Izvi zvinogona kunyatsoderedza hutachiona inductance, nepo nzvimbo hombe yepasi inogona kunyatso kuderedza ruzha mwaranzi. 4, mubhodhi redunhu rakadhindwa riine rimwe kana mativi ese eplate yepasi
Ndokunge, nechidimbu chealuminium kana simbi yakasungirirwa kune rakadhindwa redunhu bhodhi kumashure (kunyorera pamusoro), kana bhodhi rakadhindwa rakabatwa mune maviri aruminiyamu kana simbi ndiro. Iyo yekumisikidza ndiro yakaiswa padhuze sezvinobvira kune yakadhindwa redunhu bhodhi uye inofanirwa kuve yakabatana kune (SG) optimum ground point yeiyo system chiratidzo. Ichi chimiro chiri nyore uye chiri nyore kuita akawanda-masenduru akadhindwa wedunhu bhodhi kopi bhodhi. Kana iwe uchida kuteedzera zvirinani kudzvinyirira mhedzisiro, rakadhindwa redunhu bhodhi rinogona kuiswa mune rakadzivirirwa zvakakwana simbi bhokisi, kuti irege kuburitsa, usapindure kuruzha.
Pcb kopi bhodhi matanho
Chekutanga nhanho kutora chidimbu chePCB, kutanga mupepa kunyora zvese zvinhu zveiyo modhi, parameter, pamwe nenzvimbo, kunyanya diode, iko kunongedzwa nekatatu chubhu, iko kunongedzwa kweiyo IC gap. Zvirinani kune kamera yedhijitari mifananidzo miviri kubva panzvimbo. Iye zvino pcb inowedzera kuwedzera diode triode, vamwe havateereri kuti vasaone pamusoro.
Chechipiri nhanho, bvarura ese akadhirowa kopi bhodhi, iyo tini mumakomba ePAD uye ibviswe. PCB yakachena nedoro, wozoisa mukati meiyo scanner, iyo scanner kuti itarise painoda imwe yepamusoro mapikisheni, kuti uwane mufananidzo wakajeka . Tsamba bepa richakwira kumusoro uye pasi nemvura ichikuya zvishoma, kupukuta kusvika kumhangura firimu, kupinda mu scanner, tanga PHOTOSHOP, yakagogodza matanda maviri zvichiteerana muvaravara mode. Ziva kuti iyo pcb inofanirwa kuve yakatwasuka kunyangwe yakatwasuka, isa mu scanner kana kuongorora mufananidzo hakushandisike.
Nhanho yechitatu, gadzirisa misiyano yetendevhi, musiyano, yemhangura firimu chikamu uye kwete chikamu chemhangura firimu musiyano, wobva mufananidzo wekutanga kune mutema nemuchena, tarisa kana mutsetse wakajeka, kana usina kujeka, dzokorora danho iri Kana zviri pachena, zvichapona kune iyo nhema nechena TOP. Iyo BMP faira fomati yeBMP neBOT. BMP, kana akawanikwa matambudziko magirafu anogona zvakare kugadzirisa uye kururamisa muPHOTOSHOP.
Nhanho yechina, iwo maviri BMP fomati muPROTEL fomati faira, zvichiteerana muPROTEL kuchinjira mumatanho maviri, senge maviri rukoko rwePAD uye nzvimbo yeVIA yakakosha kuitika, kuti nhanho dzinoverengeka usati waita zvakanaka kwazvo, kana paine kutsauka , wobva wadzokorora nhanho 3 Saka pcb kopi bhodhi ibasa rekutsungirira rinodiwa, nekuti dambudziko diki rinokanganisa mhando uye kuteedzera bhodhi mushure memutambo.
Chechishanu, iyo yepamusoro TOP yeBMP inogona kushandurwa kuita PCB, chenjera kuti uve SILK rukoko, iyo dura yero, ipapo iwe uri mune TOP rukoko irikutsvaga, uye kudhirowa mudziyo zvinoenderana nhanho yechipiri. Mushure mekukweva kunodzima iyo SILK dura. Kudzokororwa ziva kudhirowa matese ese.
Nhanho 6, TOP muPROTEL PCB uye BOT. PCB yakabatanidzwa, ikaita girafu maererano neOK.
Nhanho 7, iyo TOPLAYER ine laser maprinta, BOTTOMLAYER zvakateedzana zvakadhindwa pane yakajeka firimu (1: 1 ratio), isa iyo firimu paPCB, enzanisa zvikanganiso, kana hongu, wapedza.
A uye ndiro yepakutanga iyo imwechete kopi bhodhi yakazvarwa, asi inongova hafu yaitwa. Kwayedza, bvunzo kopi ndiro yemagetsi tekinoroji mashandiro akafanana neiyo yekutanga ndiro. Kana yapera. Ongorora: kana iri multilayer uye yakanyatso kupurinda kune iyo mukati memukati, panguva imwechete, dzokorora nhanho, yechitatu kusvika yechishanu kopi bhodhi zita remifananidzo rakasiyana, hongu, rinoda kutemerwa maererano nenhamba yematanho , iro rakapetwa kaviri mapaneru rakareruka kupfuura multilayer kopi bhodhi, multilayer kopi ndiro inowirirana kuenderana, saka purofesa-sional kopi bhodhi tarisa uye chenjera (kusanganisira yemukati gwara gomba uye giraidhi gomba hakusi nyore kuoneka dambudziko).
Kamuri 302, RongXing Kuvaka, FuHao Bindu, 168 # Mugwagwa Wakakura,
Bantian Street, Longgang Dunhu, Shenzhen Guta, Guangdong, China.
Chip Code Bvisa